Sidaan baa adiga foomka u buuxin - Migrationsverket
Instruktioner till ansökan om särskilt bidrag till vuxna – somaliska
Sharaxaad ka bixi sababta adiga ugu baahantahay alaabtaas ama adeegaas.
Ku soo qor wixii waraaqo aad soo raacineysid foomka codsiga sidaa u caddeeysid baahida adiga u qabtid alaabtaas ama adeegaas.
Ku qor inta warbixintaada oo dhaqliga ku soo galo adiga markey noqoto mushaar oo shaqo ama kaalmo dhaqaalo ey hey’add dowladeed ama urur ku siiyo, tusaale ahaan lacagta jirada, lacagta gunnada waalidka ama kaalmada carruurta oo ey soo dirto Qasnada ceymiska[Försäkringskassan].
Ku qor inta haddii adiga haystid lacag kale oo caddaan ah oo aanan eheen kaalmada nolol maalmeedka ey Hey’adda socdaalka ku siiso.
Ku qor inta haddii adiga haystid dhaqli oo hanti oo tusaale ahaan baabuur, hanti bangi iswiidhish ama wadan kale u taal, iska leedahay shirkad, saami ama hanti ku lee yahay wadan kale, oo adiga iibinkartid sidaa u heshid lacag caddaan ah.
inaa adiga fahamsantahay waxa aad saxiixeysid waxa ey tahay.